यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी ! - indrenikhabar
Thursday 6th , May 2021
Indreni Khabar (August 17th, 2020) स्वास्थ्य/जीवन शैली
एजेन्सी : हरेक व्यक्तिको जन्म बार र समयबाट जन्मकुण्डली बनाउने वा भविष्यवाणी गर्ने गरिन्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार आफू जन्मेको बारको ग्रहको प्रभाव जीवनभर रहने गर्छ। आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको हुन्छ भने बुधवार बुधको प्रभाव रहने गर्छ । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । यी ग्रहहरुले तपाईको आयआर्जनमा समेत प्रभाव पार्ने गर्छन। आज हामी तपाईहरुलाई कुन बार जन्मेकाले कति सम्पति कमाउन सक्छन भन्ने विषयमा जानकारी गराउदैछौ ।
शास्त्रअनुसार यस्ती युवतीसँग भुलेर पनि नगर्नुहोस विवाह! जीवन नर्क बन्नसक्छ
काठमाडौँ : प्राय हामी बिवाहको विषयलाई लिएर अत्यन्त सावधानि अपनाउनु जरुरि हुन्छ। पुरुषहरुले बिवाह...
गाईको गहुँतमा पाइन्छ सयौ रोग निको पार्ने अद्भुत शक्ति
स्थानीय गाईको गहुँतबाट १४८ प्रकारका रोग निको हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।...
कुन बार जन्मेकाले कति सम्पति कमाउन सक्छ? जानिराखौ
बिहान खाली पेटमा खानुहोस् यो चिजः पेटलाई गर्छ फाइदा
पोलियो थोपाको साटो स्यानिटाइजर खुवाएपछि, बालबालिका अस्पताल भर्ना
महिलाको ढाड दुखनी समस्या नठान्नुहोस् साधारण
बच्चालाई लागेको नराम्रो नजर उतार्न अपनाउनुहोस् यी पाँच उपाय
‘कन्डम परिक्षक’ बन्ने तयारीमा राकुल प्रित
२९ गतेसम्म लम्बियो उपत्यकामा निषेधाज्ञा, बिहान नौ बजेसम्म मात्र पसल खोल्न पाउने
पूर्वरानी कोमल शाहको स्वास्थ्यमा सुधार, आईसीयूमा उपचार हुँदै